भूमिपूजन गर्न ठिक्क पारेको अयोध्यामा पुजारी र सुरक्षाकर्मी गरी १७ जनामा कोरोना पुष्टि – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भूमिपूजन गर्न ठिक्क पारेको अयोध्यामा पुजारी र सुरक्षाकर्मी गरी १७ जनामा कोरोना पुष्टि
भूमिपूजन गर्न ठिक्क पारेको अयोध्यामा पुजारी र सुरक्षाकर्मी गरी १७ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं । भगवान रामको जन्मभूमी भन्दै भारतले दावी गर्दै आएको अयोध्याका एक पुजारी सहित १७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । आउँदो अगष्ट ५ मा राम मन्दिर निर्माणको तयारी गरिरहेको बेलामा एकजना पुजारी र सुरक्षाका लागि खटिएका १६ जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ ।
आउँदो अगस्ट ५ मा राम मन्दिर निमार्णका लागि भूमि पूजाको तयारी भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भूमी पुजा गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । सबै तयारी पुरा भएकै बेलामा त्यहाँका एक पूजारी र १६ जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एनडिटिभीले जनाएको छ।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोषले अयोध्यामा भगवान रामको मन्दिर निर्माण हुने क्षेत्रमा हुने भूमि पूजाका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपस्थिति हुने यसअघि नै जनाएको थियो । सो कार्यक्रममा मोदीसहित ५० जना विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुने तयारी छ ।
सामाजिक दूरीसहितका सबै नियम पालन गरिने पनि कोषले उल्लेख गरेको छ । भूमि पूजाका लागि अगस्ट ५ को दिउँसो १२ बजेर ३५ मिनेट ३२ सेकेण्डको उत्तम साइत निकालिएको छ । अयोध्या भूमी पुजनको विषयलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले महत्वका साथ उठाएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको वास्तविक जन्मस्थान नेपालकै ठोरीमा रहेको भन्दै अभिब्यक्ति दिएपछि भारतमा त्यसको विरोध भएको थियो ।
भारतको अयोध्यावाट राम सिता विवाहमा जनकपुर जन्ती आउने गरेको छ । जनकपुरमा सिताको जन्म भएको र अयोध्यामा राम जन्मिएको धार्मीम मान्यता सहित प्रत्येक वर्ष अयोध्यावाट सितालाई लिन जन्ती आउने गरेको हो ।
प’रिवार’सहित गा’यि’का कल्पना दा’हाल’को धु’मधा’म वि’वाह, ना’टकि’य कि यथार्थ ? (भिडियो सहित)
Breaking news बिहानै मेलसियाबाट आयो खुसिको खबर हेर्नु अब टिकटको पैसा बढ़ने दुःखत खबर दुबई कतार साउदी मलेशिया कुवेत सबै हेर्नु (भिडियों सहित) सेयर गरेर सबै नेपाली सम्म पुराउनु होला
कहाँ छ देश प्रेम ! सबै नेताहरु कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक भाइरस हुन्-कलाकार